Xog: Maxay la xiriirta Dooda haraysay Miisaaniyadda ay Wasaaradda Maaliyadda u gudbisay Baarlamaanka Somalia,? – Hornafrik Media Network
Xildhibaano la hadlay Hornafrik ayaa u sheegay in aysan Marna suurta gal aheyn sida loo diyaariyay lacagaha ay qaadanayan Maamul Gobaleedyada oo ay ka muuqato cadaalad daro iyo u kala eexasho.
Hornafrik waxay heshay Xog ku saabsan sida loo diyaariyay lacagaha loo qoondeeyay in la siiyo Maamul Gobaleedyada.
Lacagaha aan kor ku soo sheegnay oo hadii baarlamaanku meel mariyaan la siin doono Maamul Gobaleedyada ayaa maamul walba waxaa u sii dheer Canshuurta uga soo xaroota Dekadaha iyo Garoomadda Diyaaradaha ay Maamulaan, taas oo aan ku jirin Miiisaaniyadda Wasaaradda Maaliyadda sida loo maamulayo iyo halka ay ku xaroonayso.
Xildhibaan C/raxmaan Xaaji aadan Ibbi oo ka tirsan Golaha Shacabka ayaa sheegay in arintaan ay tahay mid aan cadaalad aheyn loona baahan yahay in dib looga laabto. Wuxuuna Xildhibaanku sheegay in Maamul leh Garoomo iyo Dekaddo loo qoondeeyay Lacagta ugu badan, halka Maamul ay ku nool yihiin Dadka ugu badan, isla markaana aan lahayn Illo Dhaqaale loo qoondeeyay Lacagta ugu yar, taasoo uu ku tilmaamay Xildhibaanku waxaan la aqbali karin.
Maxamed Xasan Ibraahim oo ah Mudane ka tirsan Golaha Shacabka ayaa sheegay in loo baahan yahay faah faahin dhab ah in ay ka bixiso Wasaaradda Maaliyadda ujeedada ay ka leeydahay in si aan cadaalad aheyn loo qeybiyo Miisaaniyadda Maamul Gobaleedyada Dalka ee ka imaaneysa Dowladda.
Dhinaca kale Rugta Ganacsiga Soomaaliya oo laba garab u kala jaban ayaa miisaaniyada sanadkaan qeyb ka ah. Waxaana hadii ay Golaha shacabka meel mariyaan ay heli doonaan lacag dhowr milyan oo doolar ah.
Qaar ka mid ah Ganacsatada waxay u sheegeen Hornafrik in arrintan ay muujinayso in la isku gacmo qabanayo Ganacsato Tartan ka dhaxeeyo. Waxayna hoosta ka xariiqeen in arrintan laga dhaxli doono Cawaaqib xun.
Miisaaniyadda hor taala Baarlamaanka waxay Dhaqaale badan u qoondeeysay Puntland oo ah Maamul Goboleedka ugu dakhliga badan Somalia, halka Maamuladda aan lahayn Dekadahana la siiyay Qoonde yar, iyadoo sidoo kale aan lagu cadayn Miisaaniyadda halka uu aadayo Dhaqaalaha ka soo xarooda Dekadaha Boosaaso, Kismaayo, iyo Garoomadda Maamul Goboleedyadda oo u muuqata in loo madax banaaneeyay.
Miisaaniyadda Dawladda waxay inteeda badan ka timaadaa Dhaqaalaha ka soo xarooda Dekadda iyo Garoonka Muqdisho, iyo Canshuur aan badnayn oo laga qaado Muqdisho. halka Beesha Caalamkana ay kabto wixii ka dhimanaada.
Wasiirka Maaliyada oo Baarlamaanka ka hor qirtay inuu ka been sheegay Dakhliga Dawladda.